को को हुन्छन् एमालेको विधान महाधिवेशनमा सहभागी ? यस्तो छ क्राइटएरिया - Baikalpikkhabar
को को हुन्छन् एमालेको विधान महाधिवेशनमा सहभागी ? यस्तो छ क्राइटएरिया
काठमाडौं, भदौ २६ / नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा करिब तीन हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन् । शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले यसअघि असोज ४ देखि ६ गतेलाई तय भएको विधान महाधिवेशन असोज १५ देखि १७ गतेलाई सार्दै महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरुको टुंगो लगाएको हो ।
को को हुन्छन् विधान महाधिवेशनमा सहभागी ?
एमालेको विधानले प्रतिनिधि परिषद सदस्यहरु विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, एमालेमा प्रतिनिधि परिषद बनेको छैन । एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि प्रतिनिधि परिषद सदस्यको चुनाव नै भएको छैन । विभिन्न निर्वाचन, एकतालगायतका कारण प्रतिनिधि परिषद गठन नभएकाले विधानको बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था गरेर एमालेले प्रतिनिधि छनोट गर्ने भएको हो । त्यसका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधानको बाधा अड्काउ फुकाउनेछ ।
शनिबार, २६ भदौ, २०७८, रातीको ०९:०८ बजे